स्वास्थ्य - Chetana Online
११ चैत्र २०७७, 2:53 am
डिल्लीराज आचार्य हरेक बर्षको मार्च २४ अन्तराष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मनाइन्छ । अर्थात् ” mycobacterium tuberculosis” क्षयरोग बनाउने किटाणु पत्ता लागेको दिन हरेक बर्षको मार्च २४ अन्तराष्ट्रिय क्षयरोग दिवस मनाइन्छ । क्षयरोग बिनाको विश्वका लागि नेतृत्वको…
७ माघ २०७७, 2:15 pm
डा. साधना बुढाथोकी दाँत हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अंग हो । हामीले खाएको खानेकुुरालाई दाँतले मसिनो बनाएर पठाउने गर्दछ । यति महत्वपूर्ण अंग हुँदा हुँदै दाँतको सुरक्षा गर्न नसक्दा हामी मध्ये धेरैले दुुःख पाउनुुपरेको छ ।…
८ मङ्सिर २०७७, 3:51 pm
काठमाडौँ । प्रविधिको विकाससँगै अब दुनियाँमा से.क्स रोबटको विकास तिब्र गतिमा भैरहेको रिपोर्ट आएको छ । आफ्नो शारीरिक आवश्यकता पुरा गर्न पनि अब प्रविधिको सहायता लिने क्रम बढ्न लागेकोले समाजशास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।…
७ मङ्सिर २०७७, 4:08 am
७ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको एन्डिबडी ६ महिनासम्म रहने र यसले कोरोनाको दोस्रो संक्रमणबाट बचाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हस्पिटलका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उनीहरुले नियमितरुपमा…
३० भाद्र २०७७, 10:39 am
घोराही ३०-भदौ / दाङमा आज थप २३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेहरुमा घोराही उपमहानगरपालिका भित्रका १२ जना महिला र ११ जना पुरुष छन् । ति मध्य घोराही उपमहानगरपालिकाका ६ जना…
१५ भाद्र २०७७, 11:30 am
१५ भदौ, । नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ । महोत्तरीको मनरा सिश्वा नगरपालिका-४ का ३५ वर्षीय हेल्थ असिस्टेन्टको मृत्यु भएको हो । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि भदौ १० गते काठमाडौं लैजाने क्रममा…
१ भाद्र २०७७, 6:22 am
चेतना अनलाइन घाेराही । दाङमा पछिल्लाे समय आर्ट (मेकअप) प्रति युवाहरुकाे आकर्षण बढेकाे छ । शुरुका वर्षहरुमा सामान्य मेकप गरे पनि महिलाहरु पछिल्लाे समय क्रेटिभ, व्राइडल, बेसिक र प्राेफेसनल मेक गर्नेहरुकाे संख्या बढेकाे छ ।…
१७ साउन २०७७, 1:58 am
चेतना अनलाइन घाेराही । नेपाल मेडिकल एसोसिएसन दाङकाे अध्यक्षमा वाल राेग विशेष डा. कुबेर कुमार रेग्मी निर्वाचित हुनुभएकाे छ । एसाेसिएसनकाे शुक्रबार सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले रेग्मीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेकाे हाे । रेग्मी…
२९ असार २०७७, 2:36 am
रुसको सेचेनोभ विश्वविद्यालयले मानिसमा गरिएको कोरोनाविरुद्ध खोपको क्लिनिकल परीक्षण सफल भएको दाबी गरेको छ। रुसकाे समाचार एजेन्सी ताससँग कुरा गर्दै अनुसन्धान प्रमुख एलैना स्माेलियचकले मानिसमा गरिएकाे खोपको परीक्षण नतिजा प्रभावकारी देखिएको दाबी गरेका हुन्। उनले…